Jizọs Ejiri Osisi Fig Kpọnwụrụ Akpọnwụ Kụziere Anyị Inwe Okwukwe | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS EJIRI OSISI FIG KPỌNWỤRỤ AKPỌNWỤ KỤZIERE ANYỊ INWE OKWUKWE
A JỤRỤ JIZỌS ONYE NYERE YA IKIKE
Mgbe Jizọs si na Jeruselem pụọ n’ehihie Mọnde, ọ laghachiri na Betani. Betani dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Ugwu Oliv. Ọ ga-abụ na o hiri n’ụlọ ndị enyi ya bụ́ Lazarọs, Meri, na Mata.
Ugbu a, chi ụtụtụ nke abalị iri na otu n’ọnwa Naịsan abọọla. Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọkwa n’ụzọ ugbu a na-alaghachi Jeruselem. Nke ahụ ga-abụ nke ikpeazụ ọ ga-aga ebe ahụ. Ọ bụkwa ụbọchị ikpeazụ ọ ga-ezi ndị mmadụ ozi ọma tupu ya emee Ememme Ngabiga, malite Ncheta Ọnwụ ya, ndị mmadụ ekpee ya ikpe ma gbuo ya.
Mgbe ha si Betani pụta, ma si n’Ugwu Oliv na-aga Jeruselem, Pita hụrụ osisi ahụ Jizọs bụrụ ọnụ n’ụtụtụ ụnyaahụ. Ọ gwara Jizọs, sị, “Rabaị, lee! osisi fig ahụ ị bụrụ ọnụ akpọnwụwo.”—Mak 11:21.
Gịnị mere Jizọs ji mee ka osisi fig ahụ kpọnwụọ? Jizọs sịrị: “N’ezie, ana m asị unu, a sị nnọọ na unu nwere okwukwe ma ghara inwe obi abụọ, ọ bụghị naanị na unu ga-eme ihe m mere osisi fig a, kama, ọ bụrụ na unu asị ugwu a, ‘Ka e bulie gị tụba gị n’oké osimiri,’ ọ ga-eme. Ihe niile unu na-arịọ n’ekpere ma nwee okwukwe, unu ga-enweta ha.” (Matiu 21:21, 22) Ọ bụ ụdị ihe a ka Jizọs kwuru na mbụ, nke bụ́ na okwukwe nwere ike ime ka ugwu si n’ebe ọ dị gaa ebe ọzọ.—Matiu 17:20.
Jizọs ji osisi fig ahụ o mere ka ọ kpọnwụọ kụziere anyị na anyị kwesịrị inwe okwukwe na Chineke. Jizọs kwuru, sị: “Ihe niile nke unu na-ekpe n’ekpere ma na-arịọ n’arịrịọ, nweenụ okwukwe na unu anatachaworị ha, unu ga-enwetakwa ha.” (Mak 11:24) Ihe a Jizọs kụziri bụ ihe dị ezigbo mkpa ndị na-eso ụzọ ya niile kwesịrị ịmụta. Ndị ọ kacha dị mkpa bụ ndịozi ya n’ihi ọnwụnwa tara akpụ na-aga ịbịara ha n’oge na-adịghị anya. Ma, e nwere ihe ọzọ osisi fig ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ na-akụziri anyị banyere okwukwe.
Otú ahụ osisi fig ahụ si yie ihe nwere mkpụrụ ma o nweghị mkpụrụ bụ otú mba Izrel si yie ndị nwere okwukwe na Chineke ma ha enweghị okwukwe. Ndị Izrel na Chineke gbara ndụ. I leekwa ha anya, ị ga-eche na ha na-edebe Iwu Chineke. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ha enweghị okwukwe, e nweghịkwa mkpụrụ dị mma ha mịrị. Ha jụdịrị Ọkpara Chineke. Ihe mere Jizọs ji mee ka osisi fig ahụ na-amịghị mkpụrụ kpọnwụọ bụ iji gosi ihe ga-emecha mee mba Izrel, bụ́ mba na-enweghị okwukwe, nke na-amịghịkwa mkpụrụ.
Mgbe obere oge gachara, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya batara na Jeruselem. Dị ka Jizọs na-emekarị, ọ gara n’ụlọ nsọ malite ịkụzi ihe. Ọ ga-abụ na ndị isi nchụàjà na ndị okenye chetara ihe Jizọs mere ndị na-agbanwe ego n’ụbọchị bọtara ụbọchị ahụ, nke mere ha ji bịa jụọ ya, sị: “Olee ikike i ji eme ihe ndị a? ma ọ bụ ònye nyere gị ikike a ime ihe ndị a?”—Mak 11:28.
Jizọs gwara ha, sị: “Aga m ajụ unu otu ajụjụ. Zaanụ m ya, m ga-agwakwa unu ikike m ji na-eme ihe ndị a. Baptizim Jọn mere, ò si n’eluigwe ka ò si n’aka mmadụ? Zaanụ m ya.” Ọ bụzi ndị isi nchụàjà na ndị okenye ga-aza ya ajụjụ. Ndị isi nchụàjà na ndị okenye gbara izu n’etiti onwe ha ka ha mara ihe ha ga-aza Jizọs. Ha kwuru, sị: “Ọ bụrụ na anyị asị, ‘O si n’eluigwe,’ ọ ga-asị, ‘Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere unu ekwereghị ya?’ Ma ànyị ga-anwa anwa sị, ‘O si n’aka mmadụ’?” Ihe mere na ha azaghị na o si n’aka mmadụ bụ na ha na-atụ ìgwè mmadụ nọ ebe ahụ egwu, ‘n’ihi na ìgwè mmadụ ahụ weere ya na Jọn bụ onye amụma.’—Mak 11:29-32.
Ndị ahụ na-emegide Jizọs amaghị ihe ha ga-aza. N’ihi ya, ha sịrị Jizọs: “Anyị amaghị,” Jizọs asịkwanụ ha: “M gaghịkwa agwa unu ikike m ji eme ihe ndị a.”—Mak 11:33.
Gịnị mere abalị iri na otu n’ọnwa Naịsan ji bụrụ ụbọchị pụrụ iche?
Gịnị ka Jizọs ji osisi fig ahụ o mere ka ọ kpọnwụọ kụzie?
Olee otú Jizọs si mee ka ọnụ mechie ndị jụrụ ya ikike o ji arụ ọrụ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Ejiri Osisi Fig Kụziere Ndị Na-eso Ụzọ Ya Inwe Okwukwe
jy isi 105 p. 244-245